मन मिल्ने केटा साथीको खोजीमा छु ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला | Rochak
June 5, 2021 NepstokLeaveaComment on मन मिल्ने केटा साथीको खोजीमा छु ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला
तपाईको कुनैपनि सम्बन्धलाई दिगो र सफल बनाउँन सबैभन्दा पहिले तपाईमा बिश्वास हुनु पर्दछ । सधै सकारात्मक सोच पनि हुनु पर्दछ । तरपनि यहाँ दैनिक लाखौं सम्बन्धमा बिभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । कहि न कही चुकिरहेका छन् । भत्किरहेका छन् त टुटिरहेका छन् ।(सम्पर्कको लागी 👇यहाँ तलको लिन्क खोलेर तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस)
किनकी सम्बन्ध सफल बनाउँन धेरै समय र मेहनत लाग्छ । यसमा प्रेम र इमान्दारी जस्ता धेरै कुराहरुले सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँने गर्दछ ।यदि तपाईले जान्नु भयो भने सम्बन्धलाई सफल बनाउँन कुनै जादूगरी काम होइन ।यसमा कुनै स साना कुराले पनि माया प्रेममा सम्बन्ध विग्रन सक्छ भने सम्बन्धलाई धेरै मेहनत जिम्मेवारी र कोशिशबाट निभाउँन सकिन्छ। सम्बन्धलाई सफल बनाई राख्न हरेक जोडीले ख्याल राख्नु पर्ने केही टिप्सहरु आज तपाईलाई हामीले दिन्छौ यदि तपाईले यही कुरा मनन गर्नुभयो भने तपाईको जीवमा पनि खुशी र सुखको आभास हुनेछ ।
एक अर्कावीच हँसाई राख्नुस् आज भोलीको एक अर्कौ सँग मोबाईल चलाएर बस्ने अनि एउटाले गरेको काममा अर्कोले कुनै पनि ध्यान नदिने हुदा सम्बन्धमा चोसो पना आईरहन्छ । त्यसैले गर्दा आपसमा दिल खोलेर हाँस्नुस् किनकि हँसाईबाट शरीरमा अक्सीटोसिन हार्मोन बन्ने गर्दछ जुन हार्मोनले सधै मुड सफा राख्छ। सधै हाँस्नेवाला जोडीको साथमा धेरै खुशीयाली रहने गर्दछ । यिनीहरुले हाँस्दै मुस्कुराउँदै जीवनको कैयौ मुश्किलका घुम्तीहरुलाई सजिलै पार लगाउँछ ।(सम्पर्कको लागी 👇यहाँ तलको लिन्क खोलेर तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस)
एक अर्काप्रति संवेदनशील बन्नुहोस् सम्बन्धबाट आनन्द उठाउँनको लागि एक अर्काप्रति सम्वेदनशील बन्नुहोस् र हरेक पलकासाथमा रमाइलोको फाइदा उठाउँनुहोस्। तपाई सम्बन्धको गहिराईमा जब तक पुग्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाई आफ्नो पार्टनरको साथ खुलेर जीन्दगी विताउँन सक्नुहुन्न। एक अर्कावीच आफ्नो डर खुशी र तनाव सबैचिजको कुरा गर्नुहोस् ।गोप्य नराख्नुहोस तपाई आफ्नो मान्छेलाई जुन सुकै कुनै पनि गोप्य कुरा नलुकाउनुहोस । (सम्पर्कको लागी 👇यहाँ तलको लिन्क खोलेर तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस)
एक अर्कालाई ठाउँ दिनुहोस् पार्टनरको हरेक सपना र चाहानामा कुनै पनि बाहाना नगरि उसलाई साथ दिनुहोस्। कुनै जरुरी छैन कि तपाईहरु दुबैको विचार एउटै हुनुपर्छ भन्ने। असहमतीलाई पनि सम्मानले स्वीकार्नुहोस्। यसरी एक अर्कावीचको दुरी सामुन्ने खुलेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नु हुनेछ (सम्पर्कको लागी 👇यहाँ तलको लिन्क खोलेर तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस)